← स्थलगत अनुगमनमा के देखेछ अध्ययन टोलिले ? प्रतिवेदनको पुर्ण पाठ	पीत पत्रकारीताको यो नमुना →	भारतिय विदेश सचिव मेनन के सन्देश वोकेर आए नेपाल ?	20
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको एक घण्टा लामो भेटमा मेननले प्रधानमन्त्री नेपाललाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । प्रधानमन्त्री र मेननबीच नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । ‘द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गर्न’ आएका मेननले भेटमा सरकार गठनमा भइरहेको ढिलाइ, एकीकृत माओवादीको आन्दोलनले नेपालको संविधान निर्माण र शान्तिप्रकृयामा पार्ने प्रभावबारे प्रधानमन्त्रीसँग चासो व्यक्त गरेका थिए ।
मेननले विशेषगरी प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको दिल्ली भ्रमणको तिथि र त्यसका एजेण्डाबारे नेपालका अधिकारीसँग छलफल गर्नेछन् । साथै उनले जारी शान्ति प्रक्रियामा ‘भारतीय दृष्टिकोण’ राख्ने स्रोतहरुले बताएका छन् । मेननसँगै भारतीय विदेश मन्त्रालय ‘साउथ ब्लक’ का नेपाल डेक्स प्रमुख सतिश मेहता पनि रहेका छन् ।
भ्रमणको एजेण्डा प्रधानमन्त्री नेपालको दिल्ली भ्रमणसमेत भएकाले उनले नेपाली अधिकारीसँग यसबारेमा पनि छलफल गर्नेछन् । दिल्ली भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा थाती रहेका विषयमा छलफल हुनुका साथै नेपाल-भारत व्यापार सन्धि नवीकरण हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै नेपाललाई भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहले दिल्ली भ्रमणका लागि राजदूत राकेश सुदमार्फत् आमन्त्रण गरेका थिए । नेपाललाइ भारतीय पक्षले ११-१३ असारमा भ्रमण गर्न प्रस्ताव गरे पनि मितीभने तय भइसकेको छैन । तर दुवै देशका अधिकारीहरुले असार पन्ध्रभन्दा अगावै भ्रमणका लागि तयारी गरिरहेका वताइएको छ । नेपालको दिल्ली भ्रमण गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणकै बेला भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनमा बढी केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
गृहमन्त्री रावलसँग मेननले नेपाल-भारत सुपुर्दगी सन्धि र विवादास्पद सीमा अतिक्रमणबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
← स्थलगत अनुगमनमा के देखेछ अध्ययन टोलिले ? प्रतिवेदनको पुर्ण पाठ	पीत पत्रकारीताको यो नमुना →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...